Etazonia: Tolona ho An’ny Tanora Mpifindra-monina Tsy Manana Taratasy · Global Voices teny Malagasy
Etazonia: Tolona ho An'ny Tanora Mpifindra-monina Tsy Manana Taratasy
Nandika (en) i Omar Zainab Ceña
Voadika ny 19 Oktobra 2012 9:57 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, polski, Português, русский, Italiano, srpski, Ελληνικά, Español
Tanora mpifindra-monina tsy manan-taratasy an'hetsiny no faly tamin'ny vaovao nivoaka: Nanome alalana ny governemantan'ny filoha Barack Obama fa afaka misoratra anarana amin'ny “tetikasa mbola miandry” ireo tanora mpifindra-monina tsy mana-taratasy, izay ahafahan'izy ireo mamaha ny olany ao anatin'ny roa taona. Ireto avy no fepetra takiana amin'ilay tetikasa [es]: 31 taona mahery nanomboka ny 15 Jiona tamin'ity taona ity ny kandidà, tonga teto Etazonia nanomboka ny faha-16 taonany, ary nianatra sy nahavita raharaha miaramila Amerikana.
Vao tafavoakan'ny Sampan-draharaha misahana ny Olom-pirenena sy ny Fifindram-monina ao Etazonia (USCIS) ny taratasy hofenoina, talanjona tamin'ny isan'ireo tanora noraisina avokoa ny birao manerana ny firenena. Navy Pier tao Chicago, ohatra, nandray tanora 10.000; 5.000 mihoatra noho izay nandrasana [es].
Mpianatra avy ao amin'ny Kolejy Nassau ao New York (sary),
tanora an-jatony manerana ny firenena no manohana ny
DREAMers (MPANONOFY). Sary tao amin'ny Flickr/longislandwins (CC BY 2.0).
Na dia izany aza, nisy ny vaovao ratsy mikasika ireo DREAMers (MPANOFY) sasany (antsoina toy izany noho ny DREAM Act na lalànan'ny NOFY), nihantsy ny Lapam-panjakana “Trano Fotsy” ny Governoran'i Arizona, Jan Brewer, tamin'ny fitsipahana ny hetahetan’ireo tanora mpifindra-monina eo amin'ny 80.000 eo izay maniry ny hahazo tombotsoa avy amin'ilay tetikasan'ny fanjakana. Tsy vao voalohany i Brewer no niditra tamin'ny adihevitra momba ny fifindra-monina. Roa taona lasa izay, nanohana ny lalà-mpanjakana nahabe adihevitra SB 1070 izy, izay notsipahan'ny Fitsarana ambony ny ampahany [es] noho ny votoaty sasany mitondra any amin'ny fanavakavahana ara-pirazanana, indrindra toy ny fanoherana ny Hispanika.
Bilaogy sasany tahaka ny Immigration Direct [es] nanazava tsara ny dikan'ny “tetikasa mbola miandry”:
Tsy hanome sata ara-dalàna ny tetikasa mbola miandry. Azo sokajiana ho fepetra tsy mahavoaraoka izy. Tsy mahatonga anao hanana sata ara-dalàna maharitra anefa izany, na dia ekena fa [tetikasa] mbola miandry aza, tsy ho voafafa kosa ireo taona taloha tsy ara-dalàna niainanao tao amin'ny firenena. Izany no antsoina hoe “fahatongavana tsy naha-ara-dalàna.”
Mikasika ny resaka lalàna kosa, nanazava ny bilaogy Immigration America [es] fa na dia eo aza ny hafaliam-po momba ny tetikasa, tsy maintsy tandremana tsara mihitsy ny fampiharana izany:
Ianao no tompo-tsafidy raha hanao fangatahana na tsia. Aza terena ny tenanao. Voalohany, fantaro daholo ny antsipirihany. Tsarovy, fa soso-kevitra momba ny lalàna fotsiny no nomenay. Tsy manova na inona na inona amin'ny zava-iainanao manokana izany. Raha te-hahazo toro-hevitra bebe kokoa momba ny lalàna, manatòna mpisolovava momba ny fifindra-monina.
Nifanesisesy ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Twitter. Indrindra ny fanoherana ny fepetran'ny Governora Brewer.
Victor Hugo no ohatra tsara:
@victorhugophx: Na dia eo aza ny tetikasa am-piandrasana, voadaka fitombenana ny DREAMers, satria lavina amin'izy ireo ny fanomezana taratasy fahazoan-dalana hitondra fiara.
Nilaza i Eduardo Delgado fa hifarana ny fanaovana sesitany noho ny fepetran'ny Governemanta:
@eduardodlgd: Fantatry ny tanora tsara hoe manao ahoana izany fandrahonana atao sesitany izany taloha.
Nankasitraka ny fepetra ny ben'ny tanànan’ Illinois, Luis V. Gutierrez (@LuisGutierrez), ireo izay niaro ny DREAMers:
@LuisGutierrez: #DREAMers, “Amerikana” kokoa ianareo fa tsy “mpifindra-monina.” Omano ny taratasy hiainana ny zava-misy: http://bit.ly/RdqUmq #DACA.
Na dia izany aza, ny sasany tahaka an'i David Bennion, mahita tombotsoa amin'ny hetsika nihemotra saingy misalasala:
@dcbennion: Cauteloso optimismo sobre la acción diferida para jóvenes indocumentados #inesperado
@dcbennion: Tombotsoa mampisalasala #deferredaction ho an'ny tanora tsy manan-taratasy #undocumented http://bit.ly/QFXUNN #DACA #unexpected [tsy nantenaina].